UPablo noVirginia, nguMarcel Mithois. Uphengululo olufutshane | Uncwadi lwangoku
UMariola Diaz-Cano Arevalo | 24/09/2021 12:00 | Iincwadi, Inoveli, Amabali
Kukho iincwadi obuyela kuzo rhoqo kwaye ndiyakwenza oku ngalo lonke ixesha ndibuya ekhaya, UPablo noVirginia, de UMarcel Mithois. Inye yezo ncwadi, okwangoku, ubudala, okanye unxibelelwano olukhethekileyo, ezihlala zibhalwe ku Imemori ebalulekileyo yoncwadi kwaye kuya kufuneka uphinde uwafunde amaxesha ngamaxesha. Ukuqhubeka nokuzidibanisa kuloo mbono kunye nokuzonwabisa, ekwabalulekile. Namhlanje ndithetha ngaye.
2 Pablo, Virginia kunye nam
3 Umtshato waseParis
Intatheli, umbhali wenoveli, umbhali wemidlalo kunye nombhali wesikrini UFransi, wazalwa nge-15 kaJuni ngo-1922 ePort Saïd (Egypt) wasweleka eParis ngo-2012. Umbhali wemisebenzi emininzi eyimpumelelo noJacqueline Maillan njengo Umphathi-mkhosi y Ukutshiswa lilanga, wayekwangumbhali wesikrini kumabonwakude Les Quatre Cents Coups de Virginie, ehlengahlengiswe kwikholamu yakhe evekini Iintsuku zeFrance.
Kwangelo xesha bamnika i ikholamu ehlekisayo yaye iyintoni UPablo noVirginia, kunye nokuba yintoni impumelelo enkulu. Wabhala ngaphezulu kwamakhulu amabini iminyaka emine engaphazanyiswa kwaye wayipapasha le ncwadi ngokukhetha ezinye zazo. Bade benza i Imdidlalo eqhubayo yeTV ekwahlengahlengiswa apha kwaye yabonwa kuyo I-TVE ngo-1968. Badlala kuyo UCarlos Mendy njengoPablo kunye IConchita Montes njengeVirginia.
Pablo, Virginia kunye nam
Amabali kaPablo noVirginia, umtshato waseParis ongenabantwana, ngu Ingxelo yexesha lakhe - yee-XNUMX- zombini zentlalo kunye neemvakalelo, eboniswe ngohambo lwakhe kunye nokungalunganga. Nathi UPablo ubaxelela kwasekuqaleni kwaye zonke zibhekisiwe okanye ziinkwenkwezi eVirginia, umfazi onesimilo esikhetheke kakhulu, ongxamisekileyo kwaye ngamanye amaxesha engekho zingqondweni kodwa uhlala ehlekisa.
Ndafika kubo xa ndabafumanisa ngenye imini kumashumi asibhozo eshelufini kwigumbi loomakazi bam elizweni. Isikhuselo sindenze ndakhawuleza ndayithatha le ncwadi ndayijonga nje. Emva koko ndafumanisa ukuba kunjalo isipho esivela kumama siye kutata, ababebhaliswe kwiCírculo de Lectores. Inkupho yayo yaqala ngo-1964. Ndaza ndagoduka nayo.
Akuzange kuthathe ixesha elide ukuyifunda kwaye kwaba njalo enye yeempembelelo zam zokuqala kukhetho lwam lobuqu lokufunda nokubhala kunye ilizwi elilandisayo lomntu oyindoda.
Ngamehlo anamhlanje UPablo noVirginia Akuyeki ukuba Ukufunda njengokungazi nto njengoko kusilela ukuzenzisa ngakumbi kunokonwabisa uburharha ngokusekwe kubalinganiswa abachasene ngokupheleleyo nabalinganiswa abaphambili kwaye iimeko ezininzi ezilinganayo okanye ezingaqhelekanga ababandakanyeka kuzo.
La ukuzola, ukulinganisa nokuqonda kubeka Pablo, Umsebenzi olula nozolileyo eofisini, otshatele kuVirginia, umama wendlu, kwaye umthanda kakhulu. Usixelela, nge-phlegm eninzi kodwa nothando, ububele kunye nesigqebelo, iziqephu eziba neenkwenkwezi kuye, eyahlukileyo, uzimisele, ungxamisekile kwaye ngamanye amaxesha uqulekile, kodwa rhoqo ezimisele ukwenza into okanye ukwenza ububele. Isitshixo phakathi kwezi zimbini ngu ukuzithoba kwabo buthathaka okanye iziphene.
Ke, i Iintlanga ezingama-25 ezikhethiweyo Ezisencwadini kwaye zixelwe kwizahluko ezifutshane ukusukela kubume bayo ukuya funda ukuqhuba okanye ukuqubha -zibini zezona zihlekisayo- de ukuhlela amaqela yabantwana babahlobo okanye eyintlekele imidlalo yamakhadi, Yenza usisi ongumntwana nabanye abantwana abangenakwenzeka okanye unakekele inja enkulu (engeyiyo) yomnye umhlobo. Kodwa uyanyanzelisa Funda ukudanisa umdaniso weklasikhi okanye ukujija, bhala incwadi udlale igalufa, enika ingxelo uthotho lweemeko ezimangalisa ngakumbi kwaye ezimnandi kunokuba iVirginia izama ukusombulula ngeyona ndlela ifanelekileyo okanye efanelekileyo kuye.
Kukho nezinye izahluko ezibekwe ngaphakathi uhambo lweholide okanye nabahlobo, ezinje ngeehambo ezimbini zaselwandle ezizele ngokungalindelekanga kunye nokungaqondani, ukuphuma uye endle kunye nesinye isibini sezibini ukuhlekisa kwedada kwenye yezo Virginia zazama ukubonakala eluntwini.
Omnye ngaphezu kokufunda ngokulula nangokulula inokufezekiswa kuphela mhlawumbi kwi Iivenkile ezithengisa iincwadi kunye nesiko okanye isandla sesibini nesesithathu kwindalo yonke ye-intanethi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iincwadi » Iincwadi » UPablo noVirginia, nguMarcel Mithois. Ngokufutshane balisa
UVeronica Roth: iincwadi